Memezela iNkqubo kwinkomfa ye-AEC elandelayo kunye ne-SPAR 3D 2019-Geofumadas
Matshi, 2019 Geospatial - GIS, Zobunjineli, ezintsha
Izikhulumi ze-100 zeenkomfa zenziwe zaziswe, kubandakanywa iintetho ezintsha kwi-National Geographic ne-IBM.
28 Matshi we-2019 (i-Anaheim, eCalifornia, eU.SA) - Abaququzeleli be INgqungquthela ye-AEC yeThekhinoloji ye-Expo y SPAR 3D Expo & Conference, imicimbi edibeneyo yendawo ejoliswe kwi-teknoloji yehlabathi elakhiweyo kunye nobugcisa bezorhwebo kwi-3D, ngokulandelanayo, bhengeze Yonke iNkomfa Inkqubo ezibandakanya iintetho ezintathu ezithethiweyo namhlanje.
NgoLwesithathu, i-22 ngoMeyi, yajoyina iMiMi Aung, esuka ku-NASA JPL, uDkt. Robert S. Sutor, oyiNtloko ngongameli we-IBM Q Strategy kunye ne-Ecosystem, IBM enegunya I-Quantum Computing: I-View to Future. Jon Snoddy Disney Imagineering ngoLwesine Meyi 23 i inkomfa kunye Fredrik Hiebert, ilungu National Geographic kunye Kathryn Keane, vice umongameli kunye nomlawuli iinkqubo zikarhulumente National Geographic Museum kunye intshumayelo yakhe enomxholo othi Iikhompyutha zobuchwephesha ze-3D zokufumana amava e-archaeological.
"Siyavuya ukwazisa uKeynote ongeze ngoku," utshilo uLinda McLaughlin, uMlawuli weeNkqubo zeNkomfa, uNxibelelwano oluDibeneyo. "Sonke sinomdla wokwazi iinguqu eziza kuzisa iakhompyuter kunye nemiceli mngeni ngoku ekusombululeni ngayo ingxelo kaRobert. Kwaye ndinomdla wokuba uFredrik noKathryn baphonononge amathuba okusebenzisa itekhnoloji ukuba babelane ngobutyebi bezinto zakudala kwihlabathi jikelele.
Ezinye iintetho ezihlanu ezikhethiweyo eziphambili ziya kuhlanganiswa nabanye abavela kwii-100 iinkokeli kwi-teknoloji entsha. Iinkqubo zeeNkcazo ze-AEC ezilandelayo kunye ne-SPAR 3D zibonisa iinkqubo zabo zemfundo ezahlukileyo ngokwahlukileyo, kwaye zidibanisa ukufumana ezi zinto zicwangcisiweyo. Inkomfa yenkomfa iqala ngokuqhubeka kweemveliso ngoLwesibili ekuseni nge-21 ngoMeyi kwaye iyaqhubeka imihla epheleleyo epheleleyo. Inkqubo epheleleyo ingabonwa apha https://www.spar3d.com/event/full-conference/
«Siyavuya yi-AEC I-Ajenda elandelayo: imele uluhlu olubanzi lweetekhnoloji zokwenza ubugcisa ezisetyenziswayo kushishino lwe-AEC. Yonke into esuka kwi-AR / VR kunye ne-blockchain ukuya kwindalo yoyilo lwenkcubeko kunye nezokwakha 'zikho kwi-ajenda, utshilo uBill Emison, uMongameli wale Ngqungquthela, Unxibelelwano oluDibeneyo. "Sijonge ekunikezeleni ngamabali empumelelo yabathengi kunye neenkokheli ze-AEC ezivumela ababekhona ukuba baqonde indlela itekhnoloji evelayo ebachaphazela ngayo bonke amashishini."
Ukuthetha ngenkqubo yeNkomfa ye-SPAR 3D, Nks. McLaughlin wongeze, "Ndichulumancile kakhulu ziiseshoni eziHlanganisiweyo zokuHanjiswa kweProjekthi (IPD) entsha kwi-SPAR 3D kulo nyaka. Ezi seshoni zigxile ekudityaniseni izixhobo kunye nokuhamba komsebenzi kweeprojekthi ezithile ezinje nge-LAX, iiCaltrans kunye neMigne Giant. Abona badlali baphambili kulo lonke eli xabiso lixabisekileyo, ukusuka kubanini beeaseti baye kwiikhontraktha, baya kukuchaza ukujikeleza komsebenzi ngokubanzi kuvavanyo lweemeko njengoko kunjalo ekuqhubeni nasekuhanjisweni, izixhobo zekhompyuter kunye nesoftware esetyenzisiweyo, ukudityaniswa kweesethi zedatha ezisasaziweyo, ukuhanjiswa kwedatha, iitekhnoloji ezintsha zokubonisa i-AR / VR kunye negraphgraphy, kunye nezibonelelo ezihambelanayo zokusebenzisa ubuchwepheshe be3D «.
Ukubhaliswa kwe-AEC Ilandelayo Inkcazo yeNgqungquthela ye-Technology + kunye ne-SPAR 3D Expo kunye neNkomfa ngoku ivulekileyo. Abaququzeleli bemicimbi batusa iingcali ze-AEC kunye ne-3D kubhalisa kwangaphambili ukufumana intengo efanelekileyo kunye nokuphepha imigca kwisayithi. Lwababhalisileyo angabhalisa nakweliphi na neenkomfa ukuya intetho intetho kunye nezinye inkqubo ekhethiweyo inkomfa, okanye bakhethe ukubhalisa kwi yokupasa-ukufikelela zonke ukufaka zonke iiseshoni inkomfa zombini iinkqubo. Ukubhalisa, tyelela https://xpressreg.net/register/aesp0519/landing.asp?sc=207793.
Mayelana ne-AEC elandelayo kunye ne-SPAR 3D Co-Indawo
I-AEC elandelayo Inkomfa yeNgqungquthela ye-Technology + iya kuhambelana kwithuba kunye nexesha kunye ne-SPAR 3D Expo kunye ne-2019 yeNgqungquthela yomnyaka wesibini olandelelanayo. Ngokubambisana, iziganeko ziya kuba neenkokheli zembono ezivela kwihlabathi kwiinkqubo ezimbini zeenkomfa ezahlukeneyo. Imiboniso iya kubandakanywa kwindawo yokubonakalisa inxaxheba enkulu yabathengisi, okuya kubavumela bonke abafikelelekileyo ukufikelela kwabo bonke abathengisi. Iziganeko zenethiwekhi kunye neendawo ezininzi zokubonisa iziphumo ziya kufumaneka kubo bonke abemi. Ababhalisi banokukhetha ukhetho lwe-AEC okanye i-SPAR 3D yenkomfa okanye i-All Access Pass ukuya kwiinkomfa.
Ngomxholo we-AEC olandelayo KwiNgqungquthela yeNkcazo ye-Technology
I-AEC Elandelayo I-Technology Expo + yenkomfa yinkomfa ebalulekileyo yezorhwebo neyengathathi hlangothi yabathengisi baseMntla-Amerika egxininise ekuphunyezweni nasekuhlanganiseni ubugcisa behlabathi jikelele obunokujikeleza umjikelezo wobomi beeprojekthi. Ababoneleli banikeza i-hardware, isofthiwe kunye neenkonzo, iteknoloji ekhulayo kunye nemikhiqizo yokwakhiwa / yokwakha ehambisana neprogram yemfundo ebanzi. Fumana ulwazi oluninzi www.aecnext.com.
Mayelana ne-SPAR 3D Expo & Conference
Spar 3D Expo & Conference sesona siganeko inkulumbuso jikelele ukuba isicelo lwezorhwebo technologies 3D 3D ingqalelo bhaqwa, 3D processing kunye nezixhobo nokuthelekelela 3D. Ukususela irobhothi bangabonwa, kumaqonga mobile kunye imishini ephathwayo kubo bonke 3D na apha, sebenzisa ngokoqobo, ekhoyo virtual kunye nezixhobo nokuthelekelela oxutywe yokwenene, kuphela kwimarike isiganeko ezizimeleyo umthengisi cala. Fumana ulwazi oluninzi www.spar3d.com/event.
Unxibelelwano oluchanekileyo luyinkokheli ehamba phambili yamazwe ngamazwe anesipotifoliyo semiboniso kunye neenkomfa, abantu basekuhlaleni kunye nokushicilelwa kwedijithali nokushicilela. Njengabavelisi beemveliso eziphambili zeemarike, ukuXhintana kweziNxibelelwano kudibanisa, kufundisa nokuqinisa uluntu lwasekuhlaleni kumashishini akwa-14, kuquka ukutya kunye nokusela, impilo, okwezemvelo kunye nezolawulo, ukuphathwa kwezobugcisa kunye nobuchwepheshe. Eyasungulwa kwi-1949 kunye ne-Portland, eMaine, eU.SA. UU., Ngamaqela kunye neofisi ehlabathini lonke, uLwazi loNxibelelwano luhlala luyimfihlo yecala, isizukulwana sesithathu, inkampani. Ukufumana olunye ulwazi, tyelela www.divcom.com.
UJason Lavigne, uLwazi loNxibelelwano
Post edlulileyo«Edlulileyo Iigxina ze-2019 Geospatial World Leadership ziye zaziswa kwaye ziya kuhanjiswa kwi-GWF
Post Next Umzuzu wafika: #GeospatialByDefault; ujoyine i-GWF 2019 e-AmsterdamOkulandelayo "